Ogaden News Agency (ONA) – Militariga Itoobiya oo Mar Kale Qalalaase Kabilaabay Ogaadeeniya.
Militariga Itoobiya oo Mar Kale Qalalaase Kabilaabay Ogaadeeniya.
Posted by Dulmane	/ August 7, 2018
Ciidamada Gumaysiga Itoobiya ee faragalinta qaawan kusameeyay wadanka Ogaadeeniya ee awalba gacanta Gumaysiga kujiray ayaa lasheegayaa in ay mar kale dib wadanka uga bilaabeen qalalaase xoogan.
Sida xogta aan kuhelayno ciidanka mulatariga Itoobiya oo si sharcidaro ah kugalay wadanka Ogaadeeniya ayaa mar kale maalinnimadii shalay oo Isniin ahayd bilaabay in ay dib ugusoo laabtaan gudaha magaalooyinka waawayn ee Ogaadeeniya gaar ahaan magaalada Jigjiga ee xarunta Gobolka Faafan.
Ciidanka gumaysigu ee magaalooyinka kusoo laabtay oo ku andacoonaya in ay amaanka sugayaan ayaa lasheegayaa in ay dad badan kulaayeen magaalooyinka Jigjiga iyo dirdhebe, waxaana lasheegayaa in kacdoonka shacabku uu mar kale kabilowday meelo badan oo Ogaadeeniya kamid ah, gaar ahaan magaalooyinka waawayn.
Ciidanka gumaysiga oo la ogyahay in ay amaanka faraha kabixiyeen kadib markii ay sixoog ah kugaleen xarumaha maamulkii ay iyag samaysteen ee Jigjiga fadhiyay, kaas oo mudo dheer shacabka ujilib xidhay gumaysiga madow ee daashaday.
Dadka shacabka ah ee lagudilay wadanka Ogaadeeniya maalinnimadii shalay oo kaliya ayaa lagu qiyaasay 20 qof waxaana lasheegayaa in magaalada Dirdhebe oo kaliya lagu dilay 15 qof oo shacab ah, kuwaas oo rasaasta ciidanka gumaysiga ugeeriyoiday.
Sidoo kale magaalada Jigjiga ayaa lasheegayaa in ay kudhinteen dhowr qof oo shacab ah kadib markii dadka Soomaalida ah iyo shacabka Itoobiyaanku ay iskufara saareen goob masaajid ah oo Itoobiyaanku ay gubi rabeen, halkaas oo dadka Soomaalida ah na ay is hor taageen.
Dhaawaca dadka shacabka ah ee Jigjiga iyo Dirdhebe ayaa lasheegayaa in uu aad aad ubatay meel badana ay kudayacan yihiin daawo iyo daryeelna aan loohaynin.
Isku soo wada xoodhiyoo dadka shacabka ah ee Soomaalida Ogaadeeniya ayaa dareemay Gumaysi hor leh oo kii farsamaysnaa kaduwan waxayna shacabku diyaar uyihiin in ay sharaftooda difaacaan inta ay awoidaan.